Ii-FAQs-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Kutheni ukhetha inkampani yakho?
Okokuqala ngabantu.Siliqela lobuchwephesha kunye neqela leenjineli ezinamava kolu shishino.Umphathi wethu ufumene isidanga sakhe e-UK ezisa le nkampani umbono wamazwe ngamazwe ngakumbi kunabanye abavelisi benqaba.Okwesibini yinkonzo, kule mveliso, umenzi kunye nabathengi kufuneka baxoxe ngeenkcukacha ezininzi zobugcisa.Sihlala sinomonde ukubuza nawuphi na umbuzo kwaye sinikeze iingcebiso zethu zobungcali kubaxhasi.Okokugqibela kodwa kuncinci, sixabisa umgangatho kakhulu.Yonke imfuno yabathengi iya kuhlangabezana kwaye sizimisele ukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kubo bonke abathengi bethu.
Ixabiso lixhomekeke luhlobo luni lweenqaba ozidingayo.Kuhlobo olwahlukileyo lwenqaba, imathiriyeli ekrwada inokwahluka kwaye umsebenzi wokwenziwa kolunye uhlobo lwenqaba unokuba nzima kunabanye.Yiyo loo nto sifuna ukubona umzobo wabathengi emva koko sinike ikowuteshini.
Kuthekani ukuba andinawo nawuphi na umzobo?
Ukuba abathengi abanawo umzobo, sinokunikezela ngeentlobo ezininzi zeenqaba ezilungiselelwe abathengi ukuba bazikhethe.Kwiimeko ezininzi, sinokunika umzobo wohlobo lwenqaba olufanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi.Ukuba umgca wothumelo unzima, sisanikezela ngenkonzo yoyilo kubathengi bethu.
yintoni i-odolo encinci?
Asinayo iodolo encinci kwaye siyayamkela nayiphi na iodolo evela kubaxumi.
Inde kangakanani imveliso?
Ngokuqhelekileyo sinokwenza ukuthunyelwa kokuqala kwinyanga enye.Ixesha lemveliso lixhomekeke ngokwenene ukuba zingaphi iinqaba ozidingayo.
Lude kangakanani usuku lokuthunyelwa kwempahla?
Ixesha lokuhambisa eYurophu, e-Afrika nakwilizwekazi laseMelika lijikeleze iintsuku ezingama-40.Kwilizwe le-ASEN, ixesha lokuhambisa lijikeleze iintsuku ze-30.Ngokuqhelekileyo, ixesha lokuhambisa liya kuba lide kunenyanga enye.
Ngaba umxhasi unokujonga iimveliso zabo ngaphambi kokuba zithunyelwe?
Ewe kunjalo.Umxhasi unokuhlola iimveliso zabo nanini na xa efuna.Ngokwenyani, samkelekile abathengi ukuba bandwendwele umzi-mveliso wethu kwaye bahlole iimveliso zabo ngaphambi kokuba zithunyelwe.Siza kubonelela abathengi be-3 iintsuku ze-3 zokuhlala.Abaphathi baya kuba nentlanganiso nabathengi abasindwendwelayo.Naluphi na uhlolo lweemveliso ezifunwa ngumxhasi ziya kuthathwa.
Ithini ipolisi yakho emva kokuthengisa?
Ngokubanzi, siya kubonelela ngayo nayiphi na inkonzo esinokuyenza ukunceda abathengi de iinqaba zidityaniswe ngokufanelekileyo.
Ngokuqhelekileyo samkela i-T / T kunye ne-L / C, i-30% kwangaphambili.